Ifumaneka eTanzhou Idolophu, kwisiXeko saseZhongshan, eZhongshan Tauras Technologies Co, Ltd (eyayisakuba yiZhuhai Nanyuxing Electronic Co, Ltd) yasekwa ngo-Novemba 1998 kwaye ikakhulu igxila ekuveliseni nasekuthengiseni abaguquli bombane bezibane ze-neon.
Ukubambelela kwifilosofi yeshishini "yokugcina kugxile kumgangatho ukufezekisa ixabiso labathengi", uZhongshan Tauras ufumene igama elihle kolu shishino kwaye iye yamkelwa ngazwi linye ngabathengi. Ukusuka ngo-1998 ukuya ku-2001, iZhongshan Tauras yaphuhliswa ngokukhawuleza. Ngo-2001, bekukho abasebenzi abayi-100 kwinkampani yethu, ebeke isiseko esiluqilima sophuhliso oluthe kratya.
NgoJanuwari, ngenxa yeemfuno zophuhliso lwenkampani, umzi-mveliso wafuduselwa eCuizhu Industrial Zone, Qianshan, Zhuhai. Indawo yefektri yandisiwe yaya kwi-600 yeemitha zesikwere, kwaye inani labasebenzi lafikelela ngaphezulu kwama-200.
Ngo-2003, isityalo sanyuka nge-1650 yeemitha zesikwere, kwaye saqalisa umgca wemveliso esemgangathweni, kukhokelela ekukhuleni okukhawulezayo kwamandla emveliso. Kwangelo xesha, inkampani ngokuthe ngcembe iphucula ubume besebe, ibeke emgangathweni inkqubo yolawulo, ukuze iguqulwe ukusuka kumasifundisane iye kwishishini elisesikweni.
Ngo-2004, inkampani yafumana impumelelo enkulu kwimveliso yayo ye-R & D isebenza 'apho amandla okugcina amandla aluhlaza okonga umbane aphuhliswa ngokuzimeleyo ekhaya.
Ngeli xesha, ngokujonga phambili kunye nokuqonda okubonakalayo kwintengiso, inkampani yenze uhlengahlengiso lobuchule kubume bayo bemveliso; apho iimveliso zombane ze-LED zabekwa kwindawo yokuqala; ngokufanayo ijelo lokuthengisa liye landiswa nakwiimarike zamanye amazwe.
Ngo-Epreli, inkampani yamenywa ukuba ijoyine i-China Association of Industry Lighting kwaye ukusuka apho yaba lilungu le-China Association of Industry Lighting.
Ngo-Epreli, inkampani yanikezelwa ngesihloko esithi "ishishini eliphambili elinomgangatho oqhubekayo ofanelekileyo kunye nophawu oluthembekileyo" emva kokuba iimveliso zalo zenguqu zombane zesibane se-neon zibekwe esweni kwaye zahlolwa ngurhulumente.
NgoJanuwari, iimveliso zamandla okutshintsha amandla ombane we-LED kwinkampani ipasile isiqinisekiso se-UL kwaye banikwa isatifikethi se-UL.
Ngo-Matshi, i-LED yamanzi-proof switch switch amandla ombane iimveliso zigqithisile i-voltage eqhubekayo ye-CE kunye ne-CE yokuqinisekisa ukhuseleko ngoku kwaye banikwa izatifikethi ezihambelanayo.
Ngo-Meyi, i-casing yamandla e-LED yokutshintsha amandla ayilelwe yinkampani yanikwa isatifikethi selungelo elilodwa lomenzi.
Ngo-2005, iimveliso zamandla okutshintsha amandla e-LED eziphandiweyo kwaye zaveliswa yinkampani yaqala ukuvelisa ngobuninzi, kwaye iimfuno zeemarike zandiswa ngokuqhubekayo; ukwanelisa ukwanda kweemfuno zentengiso, inkampani inyuse indawo yayo yomzi-mveliso ukuya kwi-1,650m2 kwaye yaqala ukusebenzisa umgca wemveliso omtsha; elenza ukuba inkampani yomeleze umthamo wayo wokuveliswa kwemveliso yamandla okutshintsha amandla e-LED.
Ngo-Meyi, inkampani yapasisa isiqinisekiso senkqubo yolawulo lwe-ISO9001 kwaye yanikwa isatifikethi; inkqubo yolawulo lomgangatho esemgangathweni nocwangcisiweyo ibeke isiseko esiqinileyo kuphuhliso lwayo olukhawulezayo.
NgoJulayi, iimveliso zamandla okutshintsha amandla e-LED zadlulisa isatifikethi seRoHs (isatifikethi se-EU sendalo) kwaye banikwa isatifikethi esihambelanayo.
NgoSeptemba, isiguquli se-elektroniki sokukhanya kwe-neon sanikezelwa ngesihloko esithi "Imveliso yokukhanya ephezulu ye-neon yase-China" yiKomiti yeZibane yeNeon ye-China Advertising Association.
NgoJanuwari, inkampani yamenywa ukuba ijoyine i-Neon Lamp Committee ye-China Advertising Association kwaye yaba lilungu lekomiti ye-Neon Lamp Committee ye-China Advertising Association.
NgoJulayi, iimveliso zamandla okutshintsha amandla e-LED zadlulisa isatifikethi se-EMC (isiqinisekiso sokuhambelana kombane waseYurophu) kwaye banikwa isatifikethi esihambelanayo.
Ngo-Novemba, i-LED-proof-switch switch switch yeemveliso zadlulisa isatifikethi seFCC (isiqinisekiso sokuhambelana kombane waseMelika) kwaye banikwa isatifikethi esihambelanayo.
Ngo-Novemba, iimveliso zothotho lwamandla okutshintsha amandla e-LED zadlulisa isiqinisekiso se-IP66 kunye ne-IP67 (isiqinisekiso samanzi saseYurophu) kwaye banikwa isatifikethi esihambelanayo.
Unyaka ka-2009 wawungumcimbi ophakamileyo wenkampani. Ukuze ijolise ekwaziseni igama lenkampani, le nkampani yathiywa igama njenge “Zhuhai Tauras Technologies Co., Ltd”; neyayigcinwa ifana nophawu lwentengiso olubhalisiweyo lwemveliso ukulungiselela ukubonwa kwezentengiso.
Ngo-Matshi, indawo yomzi-mveliso iyonke yayiyi-10,000m2 kwaye uninzi lwe-R & D ephezulu kunye nabasebenzi bezolawulo baziswa ngokuqhubekayo.
Ngo-Meyi, i-LED yamanzi-ubungqina bokutshintsha amandla kuthotho lweemveliso zigqithisile isiqinisekiso se-KC (isiqinisekiso sokhuseleko saseKorea) kwaye banikwa isatifikethi esihambelanayo.
Nge-Agasti, i-LED yamanzi-proof switch switch amandla ombane iimveliso zigqithisile isatifikethi seMM (isiqinisekiso sendlela yokhuseleko yaseJamani) kwaye banikwa isatifikethi esihambelanayo.
Ngo-Septemba, iimveliso zothotho lobungqina bamanzi e-LED zadlulisa isiqinisekiso se-IP68 (isiqinisekiso sobungqina bamanzi saseYurophu) kwaye banikwa isatifikethi esihambelanayo.
NgoJulayi, iimveliso zamandla okutshintsha amandla e-LED zamkelwa njenge- "eyaziwa kunye nemveliso yegama lePhondo laseGuangdong" yiKomiti ye-CHC Guangdong.
Kwakuloo nyaka mnye, umthamo wentengiso waqhekeza ngekhulu lezigidi zeYuan; inkampani yangena kwinqanaba elitsha lophuhliso.
Ngo-2011 ukuya ku-2014
NgoJanuwari ka-2011, uZhuhai Tauras wamenywa ukuba ajoyine iKomiti yeZibane yeNeon yeChina yeNtengiso yeChina kwaye waba lilungu lelungu leKomiti yeZibane yeNeon yaseChina.
NgoFebruwari ka-2011, iimveliso zothotho lobungqina bamanzi e-LED zadlulisa isatifikethi se-SAA (isiqinisekiso sokhuseleko e-Australia) kwaye banikwa isatifikethi esihambelanayo.
NgoJulayi ka-2011, iimveliso zamandla ombane otshintsha ubungqina bamanzi zamkelwa njenge- “mveliso eyaziwayo negama lemveliso yePhondo laseGuangdong” yiKomiti ye-CHC Guangdong kwakhona.
NgoJanuwari ka-2012, iTauras yaba lilungu leyunithi YOKUKHANYA KOMTHETHO NEKOMITI YOPAPASHO LWEZIMPAWU YOMBUTHO WOKUTHENGISA ECHINA.
NgoJuni ka-2012, inkampani yafumana isatifikethi selizwe esisebenzayo sePatent kwiimodeli ezi-6 zonikezelo lwamandla.
Ngo-Agasti ka-2012t, iimveliso zothotho lwamandla e-LED ezingamanzi zamkelwa njenge “mveliso eyaziwayo kunye negama lophawu lwePhondo laseGuangdong” yiKomiti ye-CHC Guangdong kwakhona.
NgoJuni 2013, iTauras yafumana isatifikethi selungelo elilodwa lomenzi lokuhambisa umbane ngaphakathi.
I-Tauras ithenge umhlaba kwisixeko saseZhongshan, esihlala kwi-15,000 yeemitha zesikwere. Ipaki yeTauras Industrial yakhiwa. Umzi-mveliso emva koko wafuduselwa kule ndawo intsha eTanzhou Idolophu, kwisiXeko saseZhongshan, yimizuzu emi-5 kuphela ukuya eZhuhai kwaye kungaphantsi kweyure e-1 ukuqhuba ngokulandelelana ukuya eShenzhen, eGuangzhou, eMacau naseHongkong.
Ukugcina ngokuhambelana nendawo yethu yefektri, iTauras yathiywa igama ngokusemthethweni njenge- "Zhongshan Tauras Technologies Co, Ltd", ukulungiselela ukuqhuba ishishini lethu phesheya kunye nokunyusa.
Ngo-2017, befikelela kwelinye inyathelo elibalulekileyo, iTauras ibambisene neCoke Cola kwaye yanikezela ngamandla ombane kwiprojekthi yabo yeVending Machine.
Ukuphucula amandla emveliso, iTauras yamkela oomatshini abaninzi kwaye yaphucula imveliso ezenzekelayo. Izixhobo eziphambili zinjengomatshini ojikelezayo we-PCB, umatshini wokuhlaziya we-SMT, izixhobo zovavanyo oluzenzekelayo, umatshini wokucoca i-ultrasound, umatshini wokugcwalisa i-PU, amandla awaneleyo enkqubo yokuguga.
I-Tauras isungule uthotho olupheleleyo lwabaqhubi abakhokelwayo bokukhanyisa ifriji, egubungela phantse zonke iimfuno zesicelo sefriji yorhwebo, iifriji, iicooler, abathengisi, ukutya kunye nesiselo esibonisa kwimarike. I-Tauras yaba bubuchwephesha babaqhubi abakhokelwayo abasetyenziswa kwizikhenkcisi zorhwebo ezinogqithiso olubanzi lweemarike zehlabathi, ngakumbi eYurophu, kuMazantsi eMelika nakuMntla Melika.